Nhau - Sherman anoshuma kuti iyo yakasviba mvura mushure mekudonha kwepombi ine hwema
NeChipiri, pombi 72-inch iyo yakapa hafu yemvura yeguta rakaputika, ichimanikidza vagari kuchengetedza mvura yakawanda sezvinobvira kudzivirira kufashaira.
"Takacherekedza kuti mvura inopinda munzvimbo yedu yekurapa mvura kuburikidza nepombi ine hwema uye neruvara, zvinova zvakajairika mumamiriro ezvinhu akadai," akadaro mutauriri weSherman City, Nate Strauch. "Kakawanda, mvura painoshandiswa kufamba ichienda kudivi rimwe uye kamwe kamwe ikachinja nzira, inogona kugogodza zvinhu zvakawanda mupombi."
"Pombi payakatanga kugadziriswa, iyo mvura inopinda muchinochenesa mvura uye mvura inosiya nzvimbo yekuchenesa mvura yaive neruvara uye hwema," akadaro Strache. “Nekuti mvura yatobuda nepombi iyoyo, hapachina mvura panzvimbo iyoyo yekuchenesa mvura izvozvi. Naizvozvo, iyi ingori nyaya yekurasa mvura yese inotumirwa pombi nepombi. ”
"Miti yekurapa mvura ichiri kuuraya mvura, sezvazvinoita nemvura yakajeka yawakajaira," akadaro Strauch. “Saka, iyi haisi nyaya yehutano nekuchengetedza, asi haisi nyaya inonakidza futi. Ehe, vanhu vanofanirwa kubata nazvo. ”